1 Tantara 9 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goun Grika Géorgien Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tongan Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
1 Tantara 9:1-44
9 Ary voasoratra tao amin’ny tetirazana+ avokoa ny Israelita, ka voasoratra tao amin’ny Boky Momba ny Mpanjakan’ny Israely. Ary natao sesitany+ tany Babylona ny Joda, noho izy nivadika. 2 Ary ny Israelita+ sy ny mpisorona+ sy ny Levita+ ary ny Netinima+ no mponina voalohany tafaverina teo amin’ny taniny avy, tao amin’ny tanànany. 3 Tao Jerosalema+ no nonenan’ny sasany tamin’ny taranak’i Joda+ sy Benjamina+ sy Efraima ary Manase: 4 Ny avy tamin’ny taranak’i Pereza,+ zanak’i Joda+ dia i Otahy zanak’i Amihoda, zanak’i Omry, zanak’i Imry, zanak’i Bany. 5 Ary ny avy tamin’ny Silonita+ dia i Asaia lahimatoa sy ny zanany hafa. 6 Ary ny avy tamin’ny taranak’i Zera,+ dia i Jeoela sy ny rahalahin’ireo izay nisy sivifolo sy eninjato. 7 Ary ny avy tamin’ny taranak’i Benjamina dia i Salo zanak’i Mesolama, zanak’i Hodavia, zanak’i Hasenoa, 8 sy Jibnia zanak’i Jerohama, sy Elaha zanak’i Ozy, zanak’i Mikry, ary Mesolama zanak’i Sefatia, zanak’i Regoela, zanak’i Jibnia. 9 Ary enina amby dimampolo sy sivinjato ireo rahalahiny, araka ny voasoratra tao amin’ny tetirazana. Lohan’ireo fianakaviambeny, araka ny fianakaviambe avy amin’ireo rainy, ireo lehilahy rehetra ireo. 10 Ary ny avy tamin’ny mpisorona dia i Jedaia sy Joiariba sy Jakina,+ 11 sy Azaria+ zanak’i Hilkia, zanak’i Mesolama, zanak’i Zadoka, zanak’i Meraiota, zanak’i Ahitoba mpitarika tao an-tranon’Andriamanitra, 12 sy Adaia, zanak’i Jerohama, zanak’i Pasora, zanak’i Malkia, sy Masay zanak’i Adiela, zanak’i Jazera, zanak’i Mesolama, zanak’i Mesilemita,+ zanak’i Imera, 13 ary ireo rahalahiny, samy lohan’ireo fianakaviambeny, dia lehilahy enimpolo sy fitonjato sy arivo izay nahay tsara+ ny asa fanompoana tao amin’ny tranon’ilay tena Andriamanitra. 14 Ary ny avy tamin’ny Levita dia i Semaia zanak’i Hasoba, zanak’i Azrikama, zanak’i Hasabia,+ avy tamin’ny taranak’i Merary, 15 sy Bakbakara sy Haresy sy Galala sy Matania,+ zanak’i Mika,+ zanak’i Zikry,+ zanak’i Asafa,+ 16 sy Obadia zanak’i Semaia,+ zanak’i Galala, zanak’i Jedotona,+ ary Berekia zanak’i Asa, zanak’i Elkana. Nonina tany amin’ny tanàna kelin’ny Netofatita+ izy. 17 Ary ny mpiandry vavahady+ dia i Saloma+ sy Akoba sy Talmona ary Ahimana. Ary i Saloma rahalahiny no lohany. 18 Talohan’izay izy dia teo amin’ny vavahadin’ny+ mpanjaka teo atsinanana. Ireo no mpiandry vavahadin’ny tobin’ny taranak’i Levy.+ 19 Ary i Saloma zanak’i Kore, zanak’i Ebiasafa,+ zanak’i+ Kora,+ sy ireo rahalahiny anisan’ny fianakaviamben’ny Korahita,+ no niandraikitra ny asa fanompoana. Mpiandry varavarana+ tao amin’ny tranolay izy ireo. Ny razambeny koa dia niandraikitra ny tobin’i Jehovah, ka mpiambina ny fidirana no asany. 20 Ary i Finehasa+ zanak’i Eleazara+ no mpitarika teo amin’izy ireo taloha. Ary nomba azy i Jehovah.+ 21 Ary i Zakaria+ zanak’i Meselemia no mpiandry vavahady teo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana. 22 Roa ambin’ny folo sy roanjato izy rehetra voafidy ho mpiandry vavahady teo amin’ny fidirana. Napetraka tany amin’ny tanàna keliny+ izy ireo, araka ny nanoratana azy tao amin’ny tetirazany.+ Ireo no notendren’i Davida+ sy Samoela mpahita,+ ho amin’izany andraikitra izany satria mendri-pitokisana.+ 23 Koa ireo sy ny taranany no niandraikitra ny vavahadin’ny tranon’i Jehovah, dia ny tranolay, mba hanao ny anjara fiambenana.+ 24 Teo amin’ny lafiny efatra no nisy an’ireo mpiandry vavahady, dia teo atsinanana+ sy andrefana+ sy avaratra+ ary atsimo.+ 25 Indraindray dia tsy maintsy tonga mba hiaraka aminy fito+ andro, ireo rahalahiny nonina teny amin’ny tanàna kely. 26 Nisy mpiandry vavahady efa-dahy mahay, izay nitana andraikitra satria mendri-pitokisana. Levita izy ireo, ary niandraikitra ny efitra fisakafoana+ sy ny zava-tsarobidy+ tao an-tranon’ilay tena Andriamanitra. 27 Ary nanodidina ny tranon’ilay tena Andriamanitra izy ireo nandritra ny alina, satria anjarany ny niambina.+ Andraikiny koa ny lakile, mba hanokafany ny vavahady isa-maraina.+ 28 Ary niandraikitra ny fitaovana+ nampiasaina tamin’ny fanompoana ny sasany taminy, satria nisaina izany rehefa nampidiriny, ary nisaina koa rehefa navoakany. 29 Ary ny sasany kosa notendrena hiandraikitra ny fitaovana hafa sy ny fitaovana masina+ rehetra sy ny lafarinina tsara toto+ sy ny divay+ sy ny menaka+ sy ny ditin-kazo manitra+ ary ny menaka balsama.+ 30 Ary ny sasany tamin’ny taranaky ny mpisorona dia mpanamboatra menaka fanosorana+ vita tamin’ny menaka balsama nafangaro zavatra hafa. 31 Ary i Matitia anisan’ny Levita, lahimatoan’i Saloma+ Korahita, no niandraikitra ny zavatra nomasahina tao anaty lapoaly.+ Izany no andraikiny satria mendri-pitokisana izy. 32 Ary niandraikitra ny mofo mifanaingina,+ ny sasany tamin’ny taranaky ny Kehatita rahalahin’ireo, mba hanomana izany isaky ny sabata.+ 33 Ireo no mpihira,+ izay samy lohan’ny fianakaviamben’ny Levita. Tao amin’ny efitra fisakafoana+ izy ireo. Tsy nomena andraikitra hafa izy,+ satria andraikiny ny nanao ny asany andro aman’alina.+ 34 Ireo no lohan’ny fianakaviamben’ny Levita, araka ny voasoratra tao amin’ny tetirazana. Ireo no nonina tao Jerosalema.+ 35 Ary tao Gibeona+ no nonenan’i Jeiela rain’i Gibeona. Ary Maka no anaran’ny vadiny. 36 Ary i Abdona no zanany lahimatoa, ary nanarakaraka azy i Zora sy Kisy sy Bala sy Nera sy Nadaba 37 sy Gedora sy Ahio sy Zakaria+ ary Miklota. 38 Ary i Miklota niteraka an’i Simeama. Ry Simeama no nonina tao Jerosalema tandrifin’ireo rahalahiny ireo, sady niara-nonina tamin’ny rahalahiny hafa. 39 Ary i Nera+ niteraka an’i Kisy,+ ary i Kisy niteraka an’i Saoly,+ ary i Saoly niteraka an’i Jonatana+ sy Malkisoa+ sy Abinadaba+ ary Esbala.+ 40 Ary ny zanak’i Jonatana dia i Meri-bala,+ ary i Meri-bala niteraka an’i Mika.+ 41 Ary ny zanakalahin’i Mika dia i Pitona sy Meleka sy Tarea ary Ahaza.+ 42 Ary i Ahaza niteraka an’i Jara, ary i Jara niteraka an’i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry. Ary i Zimry niteraka an’i Moza, 43 ary i Moza niteraka an’i Binea, ary i Binea niteraka an’i Refaia,+ ary i Refaia niteraka an’i Elasa, ary i Elasa niteraka an’i Azela. 44 Ary i Azela nanan-janakalahy enina ka ireto avy ny anarany: Azrikama sy Bokero sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo no zanakalahin’i Azela.+